बजाजको नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर चेतक : यी हुन् ५ फिचर | Automotive News Nepal
बजाजको नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर चेतक : यी हुन् ५ फिचर २ कार्तिक, २०७६
बजाजले १४ वर्ष पछि चेतक स्कुटरलाई इलेक्ट्रिक भर्सनमा पेश गरेको छ । पुरानो मोडलभन्दा फरक, चेतकको इलेक्ट्रिक भर्सनमा आधुनिक डिजाइन र फिचर समावेश गरिएको छ ।
बजाजको इलेक्ट्रिक चेतकमा इको र स्पोर्ट दुई फरक फरक राइडिङ मोड रहेको छ । सिंगल चार्जमा इको मोडमा इलेक्ट्रिक स्कुटरको रेन्ज ९५ किलोमिटर हुनेछ, जबकि स्पोर्ट मोडलमा यसको रेन्ज ८५ किलोमिटर रहेको छ । इलेक्ट्रिक स्कुटरमा रिजेनरेटिव ब्रेकिङ र इन्टेलिजेन्ट ब्रेकिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुनेछ जसले ब्याट्री चार्ज र डिस्चार्जलाई कन्ट्रोल गर्न मदत गरेको हुन्छ ।
इलेक्ट्रिक चेतकको बारेमा जानकारी कम्पनीले दिएको छैन । तर, सो स्कुटरमा आईपी६७ रेटेड व्याट्री प्याकको प्रयोग गरिएको छ । व्याट्री हाउसहोल्ड ५–१५ एएमपी इलेक्ट्रिक आउटलेटको प्रयोग गरेर चार्ज गर्न सकिन्छ ।
सो स्कुटर शुरुवातमा भारतको पुणेमा बिक्री गरिनेछ । सो स्कुटरको बिक्री सन् २०२० देखि शुरु हुनेछ । इलेक्ट्रिक चेतक बजाजको प्रो बाइकिङ प्रिमियम डिलरशिप नेटवर्कद्वारा बिक्री गरिने छ । स्कुटरको मूल्य १ लाख २५ हजार भारु रहेको छ ।
इलेक्ट्रिक चेतक स्कुटरमा राउण्ड शेप भएको फुल डिजिटल इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टर समावेश गरिएको छ । स्कुटरमा कि लेस इन्गिशन रहेको छ र यो पुरै एपद्वारा कनेक्टेड रहेको छ । स्कुटरको फ्रन्टमा हेडल्याम्पसँगै एक ओभल लिड स्ट्रिप रहेको छ । स्कुटरको रियर प्रोफाइल निकै आकर्षक रहेको छ । यसमा स्पिल्ट स्टाइल भएको एलईडी टेलल्याम्प र साइड टर्न इन्डिकेटर्सलाई निकै आकर्षक तरिकाले जडान गरिएको छ । सो स्कुटर निलो, रातो, सेतो, सिल्भर, बीज र कालो रङमा उपलब्ध रहेको छ ।
इलेक्ट्रिक चेतकको फ्रन्टमा सिंगल साइडेड टेलिस्कोपिक सेटअप राखिएको छ । यसको रियरमा सिंगल साइडेड स्प्रिङ सेटअप राखिएको छ । सो स्कुटरको फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक जडान गरिएको छ । जबकि रियरमा ड्रम ब्रेक रहेको छ । राइडरको सेफ्टीको लागि सो स्कुटरमा स्ट्यान्डर्ड फिचरको रुपमा सीबीएस जडान गरिएको छ । स्कुटरमा १२ इन्चको अलोय ह्विल रहेको छ । साथै इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टरले व्याट्री रेन्ज, स्पिड, सर्भिस ड्यु इन्डिकेटर र क्लक जस्ता जानकारी पनि डिस्प्ले गर्छ ।
लकडाउनमा बाइक किन्नै पर्ने भयो ? टीभीएसले ल्यायो अनलाइन अर्डरको सुविधा
काठमाडौं – लकडाउनको समयमा पनि कतै जानुपरेको छ र बाइक छैन ? तपाई नयाँ बाइक...
ललितपुर – गल्फ लुब्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक नेपाल ल्युब आयल लिमिट...